Usaedze kushandura vanhu; ingovada ivo. Rudo ndirwo runotichinja. - Asingazivikanwe - Anodudzira Pedia
Isu tese takafanana asi takasarudzika. Isu tese tine chimwe chinhu chinotitsauranisa kubva kuzororo. Sezvo isu tinosika hukama, tinoona kuti vanhu vakasiyana nemabatiro atingave takafungidzira kuti vave.
Pfungwa yedu yemukati inogona kuve yekuvashandura nekutaura zvese zviri kutinetsa. Asi iyo haisi iyo nzira yakakodzera yekuenda. Mumwe wacho anonzwa kuti urikunongedza zvikanganiso zvavo uye acharamba kutambira kunyangwe paine zvimwe zvikanganiso zvavanazvo.
Zvakare, tinofanira kubvuma kuti isu tese tine zvimwe zvikanganiso. Panzvimbo pokupomerwa kana kunongedzerwa izvozvo, mumwe nemumwe wedu angada kunzwa achigamuchirwa nekuda kwedu. Ehe, pane nguva dzose nzvimbo yekuvandudza, Uye isu tinogona kuve rwumwe rutsigiro rweumwe neumwe mukuvakunda.
Izvo zvakakosha kuda uye kuratidza rudo. Ndo zvinoita kuti tinzwe kudziya uye kudiwa. Kana iwe uchida mumwe munhu nemoyo wese, iwe unoda kuvapa iyo mufaro wese uri munyika. Kana zvinosanganisira kushandura zvinhu zvishoma nezvewe, saka iwe unoita nemwoyo unoda izvozvo kana kuita zvakatendeka kuedza. Izvo zvinokuita iwe munhu uri nani mukuita izvi.
Kutsiura kunovaka inzira yakanaka yekutaura zvinhu asi hazvishande kune vanhu vane hanya, Naizvozvo, isu tinofanirwa kungwarira manzwiro emunhu uye kana isu tichinyatsoda kuchinja chero chinhu nezvavo, tinofanira wana simba murudo rwedu kuti zviitwe.
Rudo Uye Kufuridzira Quotes
Quotes Pamusoro porudo Uye Hupenyu
Zvakareruka rudo Quotes
Yechokwadi Rudo Quotes
Izvo zvakapfuura zviripo kutarisa kumashure pane zvatinokanganisa. Ramangwana riripo kuti uve nechokwadi chekuti haugadzi iwo akafanana. - Asingazivikanwe
Zvekare zvinogara zviripo kutibatsira kutarisa kumashure pane zvatinokanganisa. Hongu, tinogona kugara tichitarisa…
Kana vanhu vakakuitira hutsinye, vanoratidza zvavari, kwete zvauri. Usazvitore pachako. - Asingazivikanwe
Dzimwe nguva, taisangana nevanhu vasina hunhu vakatikomberedza, uye pavangangodaro vaitipopotera, tinonzwa…
Nhasi izuva rakanaka kuva nezuva rakanaka. - Asingazivikanwe
Nguva yakakosha uye tinofanirwa kunzwisisa kukosha kwayo chaiko. Iyo inomirira chero uye saka iyo…